ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့အရေး ဦးစားပေး သတင်းများ (နိုဝင်ဘာ ၁၀ မှ ၁၆ အထိ)
မြန်မာ့အရေး ဦးစားပေး သတင်းများ (နိုဝင်ဘာ ၁၀ မှ ၁၆ အထိ)
- KIA ဝန်ထမ်းဟုဆိုကာ ကချင်အမျိုးသား ၄ ဦးကို မတရားအသင်းဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ် click
- KIA နဲ့ ဆက်သွယ်ကြောင်း စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံရသူ ၃ ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် click
- လက်ပံတောင်းမှာ ရွာသားတွေ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ click
- နေပြည်တော်မှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ဖို့ အန်အယ်လ်ဒီ ခွင့်ပြုချက် ရရှိ click
- ဘာသာ၊ လူမျိုး မခွဲခြားဘဲ အကူအညီပေးလိုကြောင်း အိုအိုင်စီ ပြောကြား click
- OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာသမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး click
- ၀ ဒေသမှာ အစိုးရရုံးတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ် click
- အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်လာသူ ဦးအေးနေ၀င်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် click
- တိရစ္ဆာန်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ကြ (ဆောင်းပါး) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၉) click
- အသွင်ကူးပြောင်းရေး စိန်ခေါ်မှု သမ္မတဟောင်း ကလင်တန် သတိပေး click
- တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်အတူတူ လုပ်ရန် ကလင်တန် တိုက်တွန်း click
- ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မတူတာတွေ ဘေးဖယ်ထားဖို့ လိုဟု အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် ပြောကြား click
- သမ္မတဟောင်း ကလင်တန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ တွေ့ click
- မြန်မာပြည်သင့်မြတ်ရေး ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တိုက်တွန်း click
- ပစ်ခတ်မှုအပြီး လက်ပံတောင်းမှာ ဒေသခံ အများအပြား ဆန္ဒပြ click
- လက်ပံတောင်းဒေသတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရ ဒေသခံ ၅ ဦး မန္တလေးဆေးရုံတွင် ဆေးကုသနေ click
- ဒဏ်ရာရရှိသည့် လက်ပံတောင်းဒေသခံများ မန္တလေးဆေးရုံသို့ ထွက်ခွာ click
- လက်ပံတောင်းတွင် ပဋိပက္ခ ထပ်ဖြစ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးနှင့် ရွာသား ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပဋိပက္ခ ထပ်မံဖြစ်ပွား၍ လက်ပံတောင်းဒေသခံများ သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိ click
- လက်ပံတောင်း ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်များ တင်းမာ click
- ကိုထင်ကျော်ကို နောက်ထပ် ထောင် ၆ လ ချမှတ် click
- အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ မြေး ၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေး click
- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ မြေးများအပါအဝင် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားသူတချို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရ click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၉ ယောက် ပြန်လည်လွတ်မြောက် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၉ ဦး ထပ်မံလွတ် click
- OIC ၏ အကူအညီ ကမ်းလှမ်းမှု လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မတုံ့ပြန် click
- ရခိုင်ရောက် OIC ကို ဒေသခံ ၈၀,၀၀၀ ဆန္ဒဖော်ထုတ် click
- OIC အား စစ်တွေနှင့် အခြားမြို့များတွင် ဆန္ဒ ဆက်ပြ click
- ကန့်ကွက်မှုတွေကြားက OIC ရဲ့ ရခိုင်ပြည် ခရီးစဉ် click
- ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ လုံခြုံရေး နှစ်ဆတိုးမြှင့်ရန် UNHCR တိုက်တွန်း click
- လာမည့် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် မီတာခ စတင်တိုးကောက်မည်ဟု သမ္မတ ဆို click
- ဥရောပ ကုမ္ပဏီများ၏ တာဝန်သိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံ့မှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပိုမိုဝင်ရောက်လာရန် သမ္မတ တိုက်တွန်း click
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းအတွက် EU-မြန်မာ ဆွေးနွေး click
- မြန်မာ-EU ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူ click
- ၀န်ကြီးဌာနများ လုပ်ငန်းစဉ် နှေးကွေးဟု လွှတ်တော် ထောက်ပြ click
- အစိုးရ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှစ် ၂၀ စီမံကိန်း လူမှန်၊ နေရာမှန် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် အရေးကြီး click
- IMF အချက်အလက်စနစ်ထဲ မြန်မာ စတင် ပါဝင် click
- အပြောင်းအလဲ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ ဦးကိုကိုကြီး တိုက်တွန်း click
- အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေးဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်မှု အီးယူ ထောက်ခံ click
- NLD ရဲ့ နေပြည်တော် လူထုစည်းဝေးပွဲ ပိတ်ပင်ခံရ click
- ၄ ရက်ကြာ ချင်းအမျိုးသားညီလာခံ ဘုံသဘောတူညီချက် ၁၃ ခု ရရှိ click
- မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စစ်ဦးစီးချုပ် အပါအ၀င် ပါတီဥက္ကဋ္ဌရာထူး အပြောင်းအလဲလုပ် click
- အသင်းအဖွဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေသစ်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန မပါစေလို click
- ဆရာယုဒသန် မြန်မာပြည် ရောက်ရှိခြင်း နှစ် ၂၀၀ ပြည့်အခမ်းအနား ကျင်းပမည် click
- ၇၅ နှစ်မြောက် ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ (ဆောင်းပါး) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၈) click
- KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း အစိုးရတပ် ၀င်ရောက် နှစ်ဘက်တပ်များအကြား စစ်ရေးတင်းမာနေဆဲဟုဆို click
- လက်ပံတောင်းတွင် ပဋိပက္ခ ထပ်ဖြစ်၊ ရဲကင်း တိုက်ခိုက်ခံရ click
- ပုဒ်မ ၁၈ မဖြုတ်ရန် ပြည်ထဲရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ကန့်ကွက် click
- တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရေးအတွက် ကျေနပ်မှုမရှိသေးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆို click
- နိုင်ငံရေးကိုပါ ကြည့်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အီးယူကို တိုက်တွန်း click
- နိုင်ငံရေးကိုလည်း မမေ့ရန် EU ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း click
- EU လုပ်ငန်းရှင်တွေ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အားပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း click
- အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတချို့ရဲ့ ကတိအတိုင်း မလုပ်ဆောင်နိုင်မှု လွှတ်တော် ဝေဖန် click
- နိုင်ငံတော်သို့ အကြွေးဆပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနများကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဖိအားပေး click
- ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အီးယူ တရားဝင် ကမ်းလှမ်း click
- ၂၀၁၅ မတိုင်မီ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ ပြင်မည် click
- အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် မြန်မာပြည် ရောက် click
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံးဖွင့်လှစ်လိုကြောင်း အိုအိုင်စီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြောကြား click
- OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာအမတ်တွေနဲ့ တွေ့ click
- OIC အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် ကုလ ကြိုဆို click
- မင်းလှရေနံမှော် မီးလောင် ၁ ဦး သေ၊ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုက်စားမှုကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် ပျောက်ဆုံး click
- စီးပွားရေးလုပ်ရတာ ခက်ခဲနေသေးတဲ့ မြန်မာပြည် (သုံးသပ်ချက်) click
- ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ရိုက်နှိပ်ရန် အစိုးရနှင့် တိုင်ပင်ဦးမည်ဟု ဆို click
- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူပြန်ထုတ်ရေး လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး click
- ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး နားလည်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား click
- တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် TNLA နှင့် အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးရေး ခက်ခဲ click
- နောက်ရွေးမည့်သမ္မတ အသက် ၄၀ ထက် မကြီးရန် မြို့ကြီး ၈ မြို့ရှိ လူထု ဆန္ဒရှိနေဟုဆို click
- စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဆွေးနွေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် လက်ခံ click
- လစာအပြည့်မယူသည့် သမ္မတ ဥပဒေကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်ဟု အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဝေဖန် click
- တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ဟောင်း သခင်လှကြိုင်အတွက် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ လစဉ်ထောက်ပံ့ click
- ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ပြန်မွေးကြဖို့ ချင်းခေါင်းဆောင် တိုက်တွန်း click
- OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင် click
- အင်ဒိုနီးရှား မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲဖို့ ဦးဆောင်ခဲ့သူကို စတင်စစ်ဆေး click
- မြန်မာရဲများကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု ရှောင်ရှားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ဥရောပသမဂ္ဂရဲများက သင်တန်းပေး click
- ရုရှားစစ်ရေယာဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်လာခြင်းက ထူးခြားမှုရှိ စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများ သုံးသပ် click
- ထားဝယ်သို့ ဝင်လာသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ဒေသခံများ၏ ဘဝလုံခြုံမှု ထိခိုက် click
- မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကို နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည် click
- ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်မွေးနေ့ မြန်မာအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ click
- ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဥပဒေကြမ်း အနာဂတ်ပညာရေး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေဟုဆို click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၇) click
- နိုင်ငံပိုင် ရွှေ ၇ တန် ရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ် ပြောကြား click
- နိုင်ငံတော်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ရွှေ ၇ တန်ကျော်နှင့် ဒေါ်လာ ၈ ဘီလျံကျော် ရှိ click
- လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးကောက်မယ့် အစီအစဉ် တနှစ် ဆိုင်းငံ့ click
- ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မီတာခ တိုးကောက်မည်မဟုတ်တော့ click
- လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၏ မီတာခတိုးမြှင့်မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းပြီ click
- လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်မည့်ကိစ္စ လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ဆွေးနွေးရန် လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ် click
- တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး ဥပဒေမူကြမ်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ပထမဆုံး တင်သွင်း click
- AAPP ကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတချို့ တရားစွဲမည်ဟု ဆို click
- လိုင်ဇာ ဘုံရပ်တည်ချက် လက်မှတ်မထိုးသော်လည်း RCSS မူအရ လက်ခံ click
- ပါတီနှင့် လက်နက်ကိုင်များ ညှိနှိုင်းပြီးမှ အစိုးရနှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေးခြင်းက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရလဒ် ပိုကောင်းနိုင်ဟုဆို click
- အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှု သူတို့ ဘယ်လိုမြင်သလဲ click
- လိုင်စင် ရုပ်သိမ်းခံထားရသည့် ရှေ့နေများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကူညီမည် click
- OIC အဖွဲ့ ခရီးစဉ်အား မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ click
- OIC ခရီးစဉ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ click
- OIC အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်မည် click
- ခိုးဝင်သူတွေကို စိစစ်ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ လ၀က၀န်ကြီး ပြော click
- ရန်ကုန်တွင် တနေ့ ယာဉ်တိုက်မှု ၇ မှု ဖြစ်၊ တနေ့ ၁ ဦးနှုန်း သေဆုံး click
- မြန်မာအိမ်ဖော် စင်္ကာပူ အလိုရှိ click
- ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း၊ တပ်မတော်နှင့် သမိုင်းနောက်ခံမြင်ကွင်း (၁) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၆) click
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက် မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- OIC မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်ခြင်းမှာ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ခြင်း မရှိဟု သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြော click
- သြစတြေးလျ သွားမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သြစီရောက် ကချင်အဖွဲ့များ ကြိုမည်မဟုတ်ဟုဆို click
- ဥပဒေကြမ်းမှ ပြစ်မှု၊ ပြစ်ဒဏ်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကန့်ကွက် click
- ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရာတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချရန်လည်း နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေး click
- ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးမောင်အေး ကျန်းမာရေး ယိုယွင်း click
- ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဒေါက်တာတူးဂျာရဲ့  အမြင်ခံယူချက် click
- ဓာတ်အားခ လျှော့ချရေး ဆန္ဒပြမှု ရန်ကုန်မှာ ဖမ်း၊ မန္တလေးတွင် တား click
- နိုင်ငံသား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်ရေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁,၅၀၀ ခန့် လိုအပ်သည်ဟုဆို click
- မီတာခ တိုးမြင့်မှု နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ရှင်းလင်း click
- ၀န်ကြီးအသုံးစရိတ် များနေတာ စိစစ်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြ click
- အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ယာယီ) ဖွဲ့စည်း click
- ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု သံသယရှိခံရသူများ၊ စွပ်စွဲခံရသူများ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာတွင် ထိခိုက်မှုနှင့် သေဆုံးမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ် click
- ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း ကွယ်လွန်မှု ၃၄ နှစ်ပြည့် click
- အမျိုးသမီးတဦး လက်ထိတ်တန်းလန်းဖြင့် သေဆုံးမှုကြောင့် ဖမ်းထားသည့် ရဲ ၄ ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီ click
- ထိုင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဂယက်နဲ့ သင်ခန်းစာ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- ထိုင်းစက်ရုံမှာ ပိတ်လှောင်ခံရသူ မြန်မာ ၂၆ ဦး ပြန်လွတ် click
- နိုင်/ကျဉ်းစာရင်း ဒီဇင်ဘာလမကုန်မီ ပေးရန် ဦးအောင်မင်း တောင်း click
- တိုင်းရင်းသားဆွေးနွေးပွဲမှာ မထည့်သင့်တဲ့ကိစ္စ သမ္မတ ညွှန်ကြား click
- တိုင်းအဆင့် NLD ဆွေးနွေးပွဲ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်ဖို့ ထောက်ခံ click
- ၅ ရက်အတွင်း မီတာခနှုန်းထား မလျှော့ချပါက ထပ်မံဆန္ဒပြမည် click
- အားနည်းချက်များ ထောက်ပြဖို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီး ပြော click
- ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး လက်နက်ချ အညံ့ခံရေးစာချုပ် (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာ့တရားရေးမဏ္ဍိုင် ဘယ်လို တည့်မတ်နိုင်မလဲ (ဆောင်းပါး) click
- လယ်မြေသိမ်းမှု ဆန္ဒပြသူများ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရခြင်းများ (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၅) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၄) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၃) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၂) click
- အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း – အပိုင်း (၁) click
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အား
ဒေသခံပြည်သူများနှင်.အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်ခဲ.ကြသော သံဃာတော်များ မီးလောင်ဗုံး
များနဲ. အပစ်ခံရ ပြီး မီးသင်.စေခဲ.သည်မှာ ယနေ.ည
သန်းခေါင်ကျော် တွင် (၁)နှစ်ပြည်.ပါပြီ ။
အရှင်ဘုရား တို. ရဲ.အနစ်နာခံ ဆန္ဒပြ ခဲ.မှုများ ၊
သံဃာတော်များပီသ စွာသည်းခံခြင်းတရား ကိုစွဲကိုင်
ကာ ဆိပ်ဆိပ်နေခဲ.ကြသော်လည်း အရှင်ဘုရားတို.ရဲ.
ရဲ.၀ံ.စွာအနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်ခဲ.ခြင်း အားပြည်သူများ
မမေ.မလျော. ကြပါဘုရား ။